Bilowgii Suugaanta Dareenka Siyaasiga ah ee Soomaalida iyo sarbeebteeda: Qalinka Maxamed Baashe X. Xasan |
Bilowgii Suugaanta Dareenka Siyaasiga ah ee Soomaalida iyo sarbeebteeda: Qalinka Maxamed Baashe X. Xasan
Soomaalidu wixii ka horreeyey soo gelitaankii gumaystayaashii Reer Yurub ma jirin wax ku kellifaa in runta ka meermeeraan oo gabayga ama maansadooda maryo u hagoogaan oo maldahaan. Inta badan gabyaagu waxa uu ahaa afhayeenka reerkiisa ama raaskiisa, waxaanu gabaygiisa u xambaarin jiray difaaca dareenka qoyskiisa iyo weerarka beelaha kale xilliyada kala riixashada darka ceelka iyo dhulka carrosanka ah ee daaqsinta ku habboon.
Markii haddaba gumaystayaashu qabsadeen dhulka Soomaalida qarnigii 19aad, waxa is beddelay ku yimi adduun-araggii gabyaaga, waxaana dhashay wacyi siyaasadeed oo bilow ahaa. Dareenkan siyaasiga ahi xilligaas kama horrayn, marka laga reebo kacdoonno diini ahaa oo sinnaa qarnigii 15aad xilligii Axmed Guray, kuwaas oo aan Soomaalida gaar u ahayn, balse ahaa qaddiyad ka dhaxaysa muslimiintii Geeska Afrika.
Soomaalidii hore gabaygu waxa uu ahaa isir u buuxiya kaalinta maanta TV, idaacadda iyo wargeysku ugu jiraan bulshada casriga ah. Qabsashadii Soomaalida dhulkeeda, waxa la dhalanaya dareen waddani ah iyo suugaantiisii siyaasiga ahayd.
Foolaadka gabyaaga waddaniga ah ee markii gumaysigu soo galay sida fiinta u yeedhay waxa ugu horreeya gabyaagii sooyaalka ahaa ee Faarax Nuur. Gabyaagan gumaysiga hortii buu wacyigiisu sarreeyay. Markii la joogay gogoshii qabaliga ahayd inkasta oo Faarax sidii gabyaaga kale ba ahaa afhayeenka reerkiisa, haddana waxa u gaar ahaa dareen iyo wacyi suugaantiisu soo bandhigayso.
Tusaale ahaan wuxuu lahaa geeraarka halista ah:
Ilaa uu falag meero oo
Dhulka fuudhka la saaro oo
Arab meel ka fadhiisto
Maxaa faanka duleed iyo
Faruhu ii tarayaa?!
Faarax waxa uu ka hadlayaa dhul soohdin leh oo loo aqoonsan yahay inta xadkii la jeexay. Dhul soohdin u gaar ah lehi waa isirrada ugu muhiimsan ee dal casri ah lagu gartaa.
Faarax Nuur waxa uu ahaa inta aan ogahay gabyaagii ugu horreeyay ee mawqif diidmo cad ah kala hor yimi soo gelitaamkii gumaysiga, gabay na dareenkiisa ku cabbiray xilligii cuqaashu Berbera heshiiska kula saxeexanayeen ee shacabkuna lahaa “Berberi wax go’ lagu qaado ka weyn”!
Faarax Nuur waxa tiriyay gabaygiisa caanka ah ee “Waa Duni” oo ku qummanaa aayimihii gumaysigu arlada soo gelayay ee 1887. Waa guubaabo iyo hogatus yaab leh:
Waa duni la kala iibsadoon na la ogaysiine
Waa duni xaqii la arkayaa la arjumaayaaye
Waa duni hablihii la arki jirey aqalkii diideene
Ase ila ah aakhiro sabaan iligyadiisiiye
Ingiriis Amxaaq iyo Talyaan way akeekamiye
Arligeennaa la kala boobayaa nin u itaal roone
Nimanyahow Isaaq xaajadaa la la ugaagaayo
Odayaasha loo gaynayee la anfacsiinayoo
Haddaad niman islaamiye tihiin Aadan faraciisa
Oo aydaan Ilaahay ka go’in hayna oodina,e
Waar inaga daaya yaynaan ku dhicin bahal afkiisiiye!
Waa la qabsaday Soomaalidii oo dhan oo wixii uu Faarax Nuur ka digayay baa dhacay. Soomaali inteedii badnayd way hoggaansantay ama cabsiyi ha gasho oo ha la muquuniyo ama ba garasho la’aani ha hayso’e. Hase yeeshee isla markiiba dad baa ka hor yimi oo si badheedh ah gumaysiga u diiday. Faarax Nuur ba ma oggolayn oo gabaygiisaa inoo marag ah. Waxa geyiga Soomaalida ka kacay Sayid Maxamed Cabdille Xasan oo Daraawiish abaabulay, dagaalna u hormeeyay. Kacdoonnadii Biyomaal ayaa iyana koonfurta ka heego-heegeeyay, Talyaanigana ku dhuftay wacdaro kuwii Daraawiishi Ingiriiska tustay aan ka dhicin. Halganka Daraawiishta oo ahaa kii ugu horreeyay dhinaca abaabulka iyo xoogga, waxa hormood u ahaa Sayid Maxamed Cabdille Xasan oo ahaa gabyaa fadallo cadcaddaa oo si qiimo leh maansada isugu cabbiri jiray. Gabayga qaayo-soorkiisana yaqaannay. Waxa lagu tilmaami karaa inuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee magaca Soomaalida wax ku doona, halka dadkii xilligiisa noolaa wax kaga dooni jireen qaab qabali ah.
Sayidku waxa uu abuuray dhaqdhaqaaq dareen iyo hadafyo gobannimo-doon lahaa oo ka horjeeday gumaystayaashii. Gabayadiisa ayaa ujeeddooyinkaas laga dhex helayaa. Xorriyad doonnimo iyo han-hoggaamiyennimo, ayuu Sayid Maxamed ku suntanaa, hammigiisu se uma suurta gelin, waxaana wax laga saaraa dariiqii uu gaadhitaanka hadafyadiisa u maray oo talo xumo, maamul xumo iyo mayal adkaan ayaa loo aaneeyaa taageeradii uu ka waayay Soomaali badan iyo jabkii soo gaadhay ba.
Haddaan waayey calan lay nashiro tan iyo Nayroobi
Miyaan waayey naamuus janniyo daalac iyo naasil!
Haddaan waayey Ciidoo naqliyo inaan Nugaal daaqo
Miyaan waayey neefaan xarbada naallo ugu fuulo!
Haddaan waayey ruux iga naxoo ii nasabad sheegta
Miyaan waayey naxariis Alliyo Nebiga jaahiisa!
Mar kale waxa uu lahaa tiiqtiiqsigan:
Loolkiyo lammaa laysku xidhay laabatada qoyska
Haddaan laamadoodsado hurdada waanan ledihayne
Lahanka iyo cadhadaan qabaan laba legdeeyaaye
Leecaanta Soomaali baa luri calooshaye
Luufluuftadaas baan u dhiman laafa lugudkeede
Maandhow laftii iga jabtaan luudayaa weliye
Maandhow lix seben buu fadhiyey Laaso iyo Cayne
Maandhow laxaadkaan qabaa laacib baan ahaye
Maandhow lib baan kala tagaa leexo dirireede
Maandhow ladqabo waa ka duuf aniyo Laaleyse!
Markii Daraawiish la jebiyey ee diyaaradaha lagu duqeeyay xarumaheedii 1919, waxa uu Seyid Maxamed tirinayaa gabay dardaaran oo qiimo badan. Gabyaagii sooyaalka ahaa Cali Dhuux oo ay Seyid hoos-ka-tuur lahaayeen ayaa markii Daraawiishtu sii jabaysay tiriyey baa la yidhi gabay digasho ah:
Bal dayaay wadaadkii wakaa sii dabayshadaye!
Seyidku markii uu gabaygaas maqlay ayuu gabaygan dardaaranka ah isna tirinayaa:
Ninkii tiisa loo daynayaa haygu diirsado’e
Kol haddaan cid laga daynahayn mawdka dabaqdiisa
Ninkii haatan igu diganayow dan iyo xeeshaada
Doodna waxaan u leeyahay dadkeer hadalka dayn waayey
Nimanyahow dammiinnimada waa lagu dulloobaaye
Dadku waxay jeclaystaan waxaan duxi ka raacayne
Dalka ma lihid anigaa ku idhi doora-weynaha’e
Daliilkii rasuulkii anaa doonayoo helaye
Diintayda anigaan ku gadan dabaqi Naareede
Anaan labada daarood tan hore derejo moodayne
dadow maqal dabuubtaan ku odhan ama dan haw yeelan
dawo lagama galo gaal haddaad daawo dhigataane
wuu idin dagaayaa kufriga aad u debecdeene
dirhamkuu idiin qubahayaad dib u go’aysaane
marka xiga dalkuu idinku odhan duunyo dhaafsad’e
marka xiga dushuu idinka raran sida dameeraha’e
mar haddaan dushii Adari iyo Iimey kor udhaafay
maxaad igaga digataan berruu diin la soo shiriye!
1920-kii ayaa Sayid Maxamed Cabdille Xasan cudurka duumada ugu geeriyooday Iimey oo ku taalla dhulka ismaamulka Soomaalida Itoobiya (AHUN)
Kacdoonnadaas gumaysigu wuu bakhtiiyay. Xilligaas wakhtiyadii ka dambeeyay waa marka suugaanta sarbeebani xoogaysanayso. Runtii iyo dareenkii dhabta ahaa ee dadka ayaa si toos ah loo cabbiri kari waayay oo maamulayaashii gumaysigaa diiddanaa.
Hayaay bal eega
Hashu waa dawladnimadii ama qarannimadii. Hashii geel ee beeluhu kala qaadi jireen ayaa dhulkii iyo qarannimadii lagu metelayaa, libaaxu na waa gumaysigii qarannimada dhacay.